आज एकैदिन सुनको भाऊ यति धेरैले बढ्याे ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…… – SUDUR MEDIA
April 21, 2021 AdminLeaveaComment on आज एकैदिन सुनको भाऊ यति धेरैले बढ्याे ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
नेपाली बजारमा हिंजो मंगलबारको दिन घटेको सुनको भाउ आज बैसाख ८ गते बुधबारको दिन बढेको छ । आजको दिनमा सुन प्रति तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार स्थानीय बजारमा आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अघिल्लो कारोबार दिन हिंजो मंगलबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । नयाँ बर्ष २०७८ सालको शुरुवाती महिना वैशाख लागेयता निरन्तर सुनको मूल्य उकालो लागेको थियो जुन हिंजो मंगलबार मात्र ओरालो लागेको थियो ।
त्यस्तै, चाँदीको भाउ लगातार चार दिन एकै भाउमा कारोबार भएपनि बुधबार भने वृद्धि भएको छ । आजको दिनमा चाँदी एक तोलामा १० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार ३१० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । वैशाख ३ गतेयता चाँदीको भाउ स्थिर रहेर प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः कुरैले जित्ने चलाख हुन्छन् यी ५ राशि भएका ब्यक्ति ! हामी धर्म, ग्रन्थ देखि ज्योतिष विज्ञान सम्म निक्कै विश्वास गर्छौ । पृथ्वीको उत्पती देखि मानिसको जन्म, मृत्युका बारेमा ज्योतिष विज्ञानले बोलेको कुरा ब्रमाण्डका सबै मानिसले पत्याउदै आएका छन् ।